मलेसियाली आमाहरूले नागरिकतामा समानताको लडाइ जिते ! - Thulo khabar
मलेसियाली आमाहरूले नागरिकतामा समानताको लडाइ जिते !
क्वालालम्पुर : मलेसियामा आमाहरूको एक समूहले बिहीबार एउटा ऐतिहासिक कानूनी लडा’इँ जितेको छ । उक्त समूह विदेशमा बच्चा जन्मा’उने महिलाहरूलाई प्रभा’वित पार्ने गरी
लागू गरिएको भेद’भा’वपूर्ण नागरिकता सम्बन्धी नियमलाई उल्ट्या’उन सफल भएको छ। उक्त नियमले विदेशी पतिबाट जन्मिएका ब_च्चाहरूले स्वतः नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधानलाई क’टौती गरेको र उक्त नियम भेद’भाव’कारी र
हेको आमा समूहले दाबी गरेका थियो । उनीहरूको तर्क थियो “यस्तो प्रतिबन्ध दक्षिण पूर्वी एसियाली देशका पुरुषहरुका निम्ति भने आक’र्षित छैन । यो नियम रु’ढीवादी विचारले ग्र’सित भएको र मलेसियाको संवैधानिक भावना विपरीत रहेको समेत उनीहरूले दाबी गरेका थिए ।
बिहीबार क्वालालम्पुरको उच्च अदाल’तले भने उक्त मु’द्दामा आमा समूहको पक्षमा फैसला गरेको छ। “यो फै’सलाले मलेसियाली लैङ्गि’क समानतालाई मान्यता दिएको छ जो समान’तावादी र न्यायोचित छ ।,”
एनजीओ परिवार सीमानाका अध्यक्ष सुरी केम्पेले भनिन् । यो फैसला सबै मलेसियाली आमाहरूमा लागू हुन्छ मुद्दाका पक्ष विपक्षमा मात्र होइन, केम्पेले थप पु’ष्टि गरिन् । तर सरकारको तर्फबाट भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। -रासस/एएफपी